Nantsi intshumayelo kutshanje ndazishumayela kuYeremiya 31:33. iingongoma yam engundoqo:
Mstoniajohn • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:31 mna • impendulo
Ndifumene #goodlifebook yam kwaye i ndiza uthando kuyo. UThixo anisikelele uhambo. Ndiyakuthanda ukubona ukuba uYehova wenza witrh ebomini bakho
Scott Larrison • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:31 mna • impendulo
Enkosi yakho ngokwabelana inyaniso yeLizwi likaThixo. Umyalezo wakho wayichukumisa intliziyo yam ngale ntsasa. UThixo akusikelele nawe umzalwana kwaye ndiyathemba ke ukuba ubona bonke OKC ku 10/25.
Cdallenbach1212 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:31 mna • impendulo
ugcine ukwenza into ur ukuba iNkosi